China Rubber Stator Uye Rotor Ye Flotation Machine fekitori uye vanotengesa | Arex
The stator uye rotor, ainyanya kushandiswa flotation muchina XJK akatevedzana, XJQ akatevedzana, SF akatevedzana, BF akatevedzana, KYF akatevedzana, XCF akatevedzana, JJF akatevedzana, BS-K akatevedzana.
Iyo rotor uye stator yemuchina wekutsikisa unowanzo nyorwa nesimbi masaga maficha uye anopfeka-asingagadzirike rabha. Metal skeleton inoisa inoitwa neyemberi murazvo yekucheka uye wozowirirwa nenzira kwayo pasi pesimba maitiro maitiro. Iko kusimba uye kuenzanisa mashandiro emapfupa anoiswa inovimbiswa nekuyera kuona kuburikidza neyakasimba balancer. Irabha rotor uye stator yeflotation muchina pamusoro paive zvakasunganidzwa nekupfeka-isingagadzirike rabha uye zvobva zvashongedzwa patembiricha yakakwira.
Kambani yedu ine mazana mazana matatu emazana matani epuru hombe flat vulcanizer uye inokwanisa kugadzira rotor uye stator yemuchina wekuyeresa kubva pakapetwa 200 kusvika ku2400 mm. Kana iko kudiwa kuchinyanya kukosha, tinogona kuzvigadzirisa maererano nezvinodiwa nevatengi.
Zvivakwa zverabha zvinhu
Tensile simba ≥
Acid (chigadziko) chakakwana 20% H %SO₄ （20% NaOH） 18 ℃ x24h
Elongation pazororo ≥
Kuoma kwemahombekombe A
Mhepo inopisa yekukwegura coefficient≥90 ℃ x24h
Simbi uye dhesiki adhesion≥
Kubvarura zvachose deformation≤
Mafuta anokwana 20 # oiri 100 ℃ x24h
1. Abrasion kuramba
2. Kubvarura misodzi
3. Impact kuramba
4. Chemical kugadzikana
5. Hupenyu hwakareba hwebasa
1.Kutarisa mapfekero ekupfeka uye chiyero munzvimbo yakakosha uye kusimbisa hunhu kuburikidza nekushanda.
2.Nokushandisa yakawanda yerabha kana ye polyurethane zvinhu kunzvimbo iyo inoda zvakanyanya muchikamu chose. Uye izvi zvinorebesa hupenyu hwekushanda.
3.Kupa nyanzvi kuongorora uye kugadzirisa paunenge uchiishandisa nevatengi vedu. Uye kuwana iyo yakajairika gadziriso mushumo mukushanda mashandiro, ayo anozopa uye nekuwedzera kuwanikwa kwemiti.
1.Iyo mbishi iri kushandisa 3CR12 isina simbi maboss, mune ngura uye bhaudhi mukukiya.
2.Welding maitiro ekupindura pane ISO zviyero nevashandi vane ruzivo uye chengeta chiyero uye chakarurama kana uchigunun'una.
3.Customing basa rinoenderana nezvinodiwa nemutengi kana tsvaga mhinduro kubva kune yedu tekinoroji timu.
Pashure: Polyurethane Stator Uye Rotor Ye Flotation Machine
Zvadaro: Polyurethane Yakarongedzwa Simbi Pipe